BBC Somali - Warar - Gaariye oo Maanta lagu aasayo Hargeisa
Gaariye oo Maanta lagu aasayo Hargeisa
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 8 Oktoobar, 2012, 05:44 GMT 08:44 SGA
Maydka abwaan Maxamed Xaashi Dhamac Gaariye ayaa laga dejiyay garoonka diyaaradaha Berbera.
Dad badan oo reer Berbera ah iyo qaar ka tegay Hargeysa, qoyskiisii , madaxda gobolka saaxil, iyo gudi wasiiro ku jiraan oo loo xilsaaray aaska abwaanka ayaa maydka ku qaabilay garoonka diyaaradaha ee berbera .
Maydka oo la soo saaray gaari ambullance ah oo ay daba luudayaan kolonyo baabuuro ah oo fara badan ayaa loo soo dhaqaajiyay xagga Hargeysa oo maanta lagu wado in lagu aaso.
Abwaan Gaariye, wuxuu kaloo ahaa professor jaamacadeed, iyadoo la fasaxay jaamicadii uu wax ka dhigi jiray Cammuud, Jaamicadda Hargeysa iyo Jaamicadda Gabilay.
Golaha wasiirada Somaliland ayaa aaska dartii u baajiyay kulan u socday. Kumanaan dad ah, ayaa ku sugan xabaalaha xeedho oo lagu wado in lagu aaso abwaan aqoonyahanka ahaa.